Tag: plugin redirection | Martech Zone
Tag: plugin redirection
WordPress: Esory ary alefaso ny rafitra YYYY / MM / DD Permalink miaraka amin'i Regex sy Rank Math SEO
Zoma, Aogositra 6, 2021 Talata, Aogositra 24, 2021 Douglas Karr
Ny fanatsorana ny rafitry ny URL anao dia fomba tsara hanatsarana ny tranokalanao noho ny antony maro. Ny URL lava dia sarotra zaraina amin'ny hafa, mety hofongorana amin'ny mpanova lahatsoratra sy ny mpamoaka mailaka, ary ny firafitry ny fampirimana URL sarotra dia afaka mandefa signal tsy mety amin'ny motera fikarohana momba ny maha-zava-dehibe ny atiny. Rafitra YYYY / MM / DD Permalink Raha toa ka manana URL roa ny tranokalanao, iza amin'ireo no hoheverinao fa nanome ny lahatsoratra misy lanjany bebe kokoa?
New Domain Regular Expression (Regex) dia miverina amin'ny WordPress
Talata, Septambra 22, 2020 Talata, Septambra 22, 2020 Douglas Karr
Nandritra ny herinandro vitsivitsy lasa izay dia nanampy mpanjifa hanao fifindra-monina sarotra amin'ny WordPress izahay. Ny mpanjifa dia nanana vokatra roa, izay nanjary nalaza hatramin'ny tsy maintsy nanasaratsarahana ireo orinasa, ny marika, ary ny atiny hampisaraka ny sehatra. Tena ny fandraisana andraikitra io! Mijanona ho azy ireo hatrany ny faritra misy azy ireo, saingy ny sehatra vaovao kosa dia hanana ny atiny rehetra momba io vokatra io… avy amin'ny sary, lahatsoratra, tranga